Poolisii: Qarshii baankii miiliyoona 80 saamuun kan shakkaman to'annoo jala oolan Kichuu
HomeAfaan OromooNewsPoolisii: Qarshii baankii miiliyoona 80 saamuun kan shakkaman to’annoo jala oolan
Poolisii: Qarshii baankii miiliyoona 80 saamuun kan shakkaman to’annoo jala oolan
Asittis baankiin saamameera; lakkii warri saamichatti muuxannoo qabdan nurraa dhaabbadhaa!
Nuti hojjannee malee, saamnee guddachuu hin beekne; beekuus hin barbaadnu!!
Isa dhihaa kana WBO’tu saame erga jettanii isa bahaa kana hoo eenyutu saame? Jawween haa deebisuu mee!! Hattuu ilmaan hattuu, hattuu jalatti dhalattee hattuu jalattu guddatte opdo qofatu kana raawwata. Isaanumatu tooftaa hannaa beeka waan tsheef.
Image copyrightBAANKII HOJII GAMTAA OROMIYAA
(bbcafaanoromoo)—-Maallaqa baankii qarshii miiliyoona 80’tti tilmaamamu karaatti saamuun kan shakkaman to’annoo jala ooluu isaanii poolisiin beeksise.
”Maallaqni samame jedhamu kan Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaati. Mudde 19, 2011 ganama keessaa sa’aatii 3:00’tti Aanaa Mi’eessoo bakka addaa Keellaa Asaboot jedhamutti saamame,” jedheera poolisiin dhimmicha qorataa jiru.
Itti-gaafatamaan Qajeelcha Poolisii Godina Hararagee Lixaa Komaandar Gaaddisaa Nugusee BBC’tti akka himanitti qaamni saame qoratamaa jiraachuu himu.
”Dargaggeeyyii naannoo sana jiraatan keessaayis meeshaa waraanaa shigguxii fa’i qabanidha jedhani gareen eeggumsa maalaqa sanaaf taasisu deeme nutti himeera,” jechuun eenyummaa kanneen shakkaman himaniiru.
Maallaqni Damee Ciroorraa bahe gara Damee Bishooftuu deemaa kan ture yoo tahu ”baankiin kan nutti himes waraqaa kaasharichi maallaqa qabatee geessuudhaaf deemuus mallatteessee kan baasu miiliyoona 80 jedha,” jedhan.
”Hanga bira geenyutti maallaqni kuni guutummaatti saamame,” kan jedhan Komaandar Gaaddisaan poolisoonni afur Ciroo irraa ramadamanii faana deemanis ”waligalteedhaan dhimmichi hiikkata kan jedhuun gara tarkaanfii biraattii hin seenne,” jedhaniiru.
Namoonni shakkiidhaan maallaqa waliin qabaman jiru kan jedhu poolisiin, shakkamtoonni ”konkolaachistoota yeroos maallaqa qabatanii deeman keessaa buusani ofii isaanii qabatanii gara magaalaa erga seenanii booda waajjira mootummaa keessa qoqqoddachuu,” isaanii himaniiru.
Poolisiin akka jedhetti haala amma jiruun dhimmicha mariin furuufi bakka shakkiin jirummoo sakatta’un qoranno gaggeessaa jiru.
Namichi cheekii sobaan qarshii miliyoon 14.7 baafachuuf ture to’atame
Shakkamtoonni eeruudhaan qabaman malee kanneen harkaafi harkatti qabaman hin jiran jedha poolisiin. Maallaqa saamame keessaa muraasa mariidhaaniifi sakatta’insaan deebisaa jiraachuus ibseera.
Bankii Gamtaa Oromiyaatti Abbaa Adeemsa Qorannofi Korporeet Komunikeeshinii Ballaxaa Waaqbeekaa waabeffachuun gaazexaan Addis Fortune jedhamu akka gabaasetti namoonni badii kanaan shakkaman 100 ta’u.
Kanaan duras, torban muraasa dura bakkuma walfakkaatutti qarshiin miiliyoona 80 kan Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa ta’e osoo Dirree Dhawaa irraa gara Finfinnee deemu Mi’eessootti qabame harka poolisii jira.
Baatii dhuma Adooleessaa 2010’tti immoo baankiin kuni dameelee lama magaalaa Jigjigaa keessaa hokkara dhalateen qarshii miiliyoona 40’tti tilmaamamu saamamee ture.
Har’a Qeellam Wallaggaa Canqaatti baankiin saamameera. Warri saame maqaa WBOn godhan. Yakki akkanaafi kanarra hamaa deddeebi’ee raaw’atamaa jira. Har’aa boru sirraaya jennee usne. Amma booda saaxiluufi balaaleeffachuutti seenna. Gorsi qabnu:
WBOn maqaa seenaa qabeessadha. Maqaa dhiiga gootowwan kumaatamaan kabaja saba kanaaf wareegamanii. Maqaa kanaan yakka hojjachuun dhiiga gootowwan kaleessaatiin qoosuudha. Dhimma kana yeroo adda addaatti hoggansa ABOfi ajajjoota WBO beekamanitti himnee, nuhii miti jechaa turan. Hamma WBOn bosona jirutti kamtu dhugaan WBO kamtu fakkeessituudha kan jedhu adda baasuun hin danda’amu. Hoggansi siyaasaafi ajajni waraanaas yakka maqaa iWBOtin dalagamu waakkatanii itti gaafatamummaa jalaa bahuun hin danda’amu. Kanaafuu ABOn yakka akkanaa maqaa seenaa qabeessaa dhaaba kanaafi waraana isaa xureessu kana dhaabsisuuf falli jiru tokkichi WBO bosonaa baasuun akka waliigaltee mootummaa waliin seenametti seera qabsiisuudha. Yakki kun itti fufnaan maqaa baduu qofa osoo hin taane mataan baduutu dhufa. Dhaamsaafi gorsa lammumaati.
25 km Radius ቀይ መስመር በታወጀበት፣ ከ50 ሺህ በላይ ወታደሮች በተጠንቀቅ ባሉበት፣ በቂ የጦር መሳሪያ በተከማቸበት እና የኮማንድ ፖስት ባለበት አካባቢ በአንድ ቀን ያውም አምስት ባንክ ያለምንም የተኩስ ልውውጥ ሲዘረፍ……የሚያስቅ “ፖለቲካዊ ድራማ” ይታየኛል፡፡
Breaking News Mootummaan naannoo Amaaraa teessoo isaa Finfinnee taasifachuuf ijaarsa isaa Finfinneetti jalqabe